एनआरएन बेल्जियम- झुटो प्रशंसा लिने की साँचो आलोचना ? - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
एनआरएन बेल्जियम- झुटो प्रशंसा लिने की साँचो आलोचना ?
२०७६ भाद्र ५ गते बिहिवार
झुटो प्रशंसा भन्दा साँचो आलोचना सयौं गुणा हितकर हुन्छ …
माथिको वाक्यांश पढदा जति आनन्द लाग्ने खालको देखिन्छ त्यति नै ब्यबहारमा प्रयोगमा ल्याउन कठिन देखिन्छ ।चाहे सामान्य मानिस होस वा कुनै पदिय जिम्मेवारी बहन गरेको ब्यक्ति नै किन नहोस् । अझ पदिय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिहरूलाई आलोचना सहन निकै कठिन नै हुने गर्दछ ।
एन आर एन बेल्जियमका अध्क्षय लोक दाहालले दुई वर्षे कार्यकाल सम्हाले ।अब उनी केन्द्र मा प्रतिष्प्रधा गर्दै छन् ।यो दुई वर्षे कार्यकालमा लोक दाहालको कार्यविधि माथि आलोचना गरेकै कारण उनले यो पंक्तिकारलाई फेसबुकमा ब्लक ठोके । ब्लक ठोक्नु सामान्य नै हो ।मन नपरेपछि ब्लक ठोक्नु मात्रै होइन साथी बाट हटाउन नी सकिन्छ ।तर आलोचना गरेकै भरमा यो कार्य गर्न कत्ति पनि सुहाउँदैन । अर्थात् दाहाल झुटको प्रसंसा चाहन्थे तर मैले साँचो आलोचनाले भरिदिए ।जुन उनलाई पचेन ।
दाहाल एउटा उदारहण पात्र मात्रै हुन । उनीजस्ता धेरै व्यक्तिहरू यो समुह भित्र पर्दछन । जसले प्रसंसा मात्रै रोज्छन् आलोचना खप्न सक्दैनन् ।त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले लिन सक्दैनन् । जुन पदिय जिम्मेवारी बहन गर्नेको हकमा पचाउन नसकिने हुन्छ ।
भर्खरै एन आर एन बेल्जियमले सहमति गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।जसमा अध्क्षय चित्र सुवेदी महासचिव तीर्थ धमला र सचिव दीपक न्यौपाने लगायतका साथीहरु छन् । यी तीन जना साथिहरुको कुरा गर्दा न्यौपाने र धमला आलोचना लाई परिवर्तन को रूपमा लिँदै कार्य गर्न सक्ने खुबी भयका छन् । अझ भन्दा कुटनैतिक हिसाबले कार्य गर्न न्यौपाने खप्पिस देखिन्छन् । तर अध्क्षय सुवेदी त्यो क्षमता देखिँदैन । विगतमा पनि सुवेदीमाथि आइपरेका धेरै आलोचनात्मक टिका टिप्पणी सहज रूपमा लिन नसकेको यो पंक्तिकारले देखेको छ । अब अध्क्षय भइसकेपछि संस्थागत विकासको लागि उनी परिवर्तन हुनि जरुरी छ ।
एन आर एन बेल्जियम मात्रै होइन बेल्जियममा रहने सबै संस्थामा यो हावी पर्याप्त छ । यसका साथै नाम को प्रचार प्रसार उत्तिकै चाहन्छन् ।केही दिन अगाडि एन आर एन बेल्जियम सम्बन्धी समाचार प्रकशित भएपछि एक जना दिदीले समाचारमा मेरो नाम खै ?भनेर गुनासो गर्नु भयो ? अर्थात् आफ्नो नाम आयन भनेर उहालाई चिन्ता थियो । तर संयोगवश सहमतिको आधारमा अहिले नयाँ कार्यसमितिमा उहाँ चयन हुनु भएको छ ।
त्यस्तै गरेर यही पंक्तिकारले केही दिन अगाडि फलानो फलानो लाई सहमति मार्फत एन आर एन मा ल्याउनु पर्दछ भनेर फेसबुकमा स्टाट्स हाल्दा एक वरिष्ठ ले तपाईंले समाचार कसले भनेर लेख्नु भयो ? पत्रकार एक गिलास बियरमा बिक्छन् । सम्म भन्न भय । अफसोच अहिले तिनै ब्यक्ति नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ पदमा आसिन छ । आगामी दुई वर्षे कार्यकाल यिनीहरूले कसरी चलाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
एन आर एन बेल्जियमको नयाँ कार्यसमितिमा केही आशालाग्दा व्यक्तिहरूको पनि प्रवेश भयको छ । तर उनीहरूमा आलोचनालाइ सकारात्मक लिएर कम गर्ने र नामको प्रचार प्रसार मा कत्तिको मोह छ भन्ने अबको दुई वर्षले मूल्यांकन गर्नेछ । जुन कुराले उनीहरूको संस्थागत कार्यशैलीलाई झन उदागर गर्नेछ । र संस्थामा रहेका खराब सोच जसको बारेमा केही पहिला सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हावी हुन दिनु हुँदैन । तर उनीहरूले ल्याएका सकारात्मक एजेण्डालाई छाड्न चाँहि हुँदैन ।
उम्मेदवार सिमित भएपछि नयाँ कार्यसमिति सहमति अनुरूप चयन भयको तीतो यथार्थ पक्का हो । यदि उम्मेदवारको लावा लश्कर लाग्ने थियो भने यो सहमति सम्भब थियन । उम्मेदवार नहुनु भनेको एन आर एन प्रतिको मोह घट्दै जानु हो । अब नयाँ कार्यसमितिले एन आर एन प्रतिको माया जगाउन बेल्जियममा उपलब्धिमूलक कार्य गर्नु जरुरी छ । युवाहरुको क्षेत्रमा उनीहरूको मर्म अनुरुप कार्य गर्न सक्नुपर्दछ । नेपाली भाषा संरक्षणको लागि प्रत्येक क्षेत्रमा नेपाली विद्यालय खोल्नु जरुरी छ । बेल्जियममा कती नेपाली छन् त्यसको लेखा जोखा हुन सके धेरै राम्रो हुनेछ । बेल्जियममा हुने नेपालीहरुको लागि एउटा अक्षयकोष खडा गर्न सके भैपरि आउने समस्या हरुलाई निराकरण गर्न सकिन्छ ।यो दुई वर्षे कार्यकालमा यस्तै यस्तै दीर्घकालीन कार्य गरिनुपर्दछ ।
भागवत गीतमा भनिएको छ कर्म गर्दै जाऊ फलको आसा नगर । हो यो कार्यसमितिले आफ्नो प्रचार प्रसार भन्दा पनि काम गर्दै जानु पर्दछ । २ वर्षको अन्तमा नतिजा आफैं आउनेछ । हैन भने धेरैले गरेको ‘अपेक्षा’ ले बाटो विराउनेछ । यसतर्फ सबै सजग हुनु जरुरी छ ।